အမျိုးသမီးအတွင်းခံတွေကို Plus-size အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Rihanna – FemaleWear.net
Rihanna တစ်ယောက်ကတော့ အခုတလော အလုပ်တွေအရမ်းကြိုးစားနေပါတယ်။ အနုပညာဘက်မှာသာမက စီးပွားရေးဘက်မှာပါ ခပ်စိပ်စိပ်လေးနေရာယူလာပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ product တွေကို အကောင်းဆုံးစဉ်းစားရင်း ကြိုးစားနေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် brand line ဖြစ်တဲ့ Fenty Beauty ဘက်ကိုလည်း မလစ်ဟင်းစေတဲ့အပြင် Fenty Puma ကိုလည်း product အသစ်တွေနဲ့ မကြာမကြာမိတ်ဆက်ပေးနေဆဲပါ။ အခုလည်း Savage နဲ့ ပေါင်းပြီး အမျိုးသမီးအတွင်းခံလိုင်းသစ်အတွက် product တွေကို မေလ ၁၁ရက်နေ့ National Lingerie Day မှာ စတင်ရောင်းချပေးမယ့်အကြောင်းကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
SavageXFenty ရဲ့ စတင်ရောင်းချမယ့် အတွင်းခံတွေကိုတော့ သာမာန် body size အတွက်ပါမဟုတ်ဘဲ body plus-size အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါ ထုတ်လုပ်လိုက်တာကို SavageXFenty ရဲ့ instagram မှာ share ပြီး ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ Rihanna ကတော့ သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် brand line တွေကို လူမျိုးအသားရောင်အပြင် ခန္ဓာကိုယ် size ကိုပါ ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတာကြောင့် အခုချိန်ထိ အားပေးသူအများပြားကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပါ။
Clear dat cache. #14days til it drops! ?| Keep up at SAVAGEX.com | cc: @louisvuittoncrocs